Global Voices teny Malagasy » Bilaogera Sinoa Nihetsika Noho Ny Fetr’andro Fanoratana Anarana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Janoary 2018 8:07 GMT 1	 · Mpanoratra Rebecca MacKinnon Nandika Vero
Namaritra ny ezaka nasosotra nataony  i Laohumiao (老虎庙) ao amin'ny 24HoursOnline mba hahafantarana hoe rahoviana sy ahoana no ahafahany manoratra anarana, indrindra fa mialoka ao amin'ny Blogbus  ny bilaoginy, izay voasoratra ho toy ny sehata mpampiantrano ny bilaoginy. (zana-tsehatra amban'izay ny bilaogin'i Laohumiao, ao amin'ny http://24hour.blogbus.com.) Araky ny tafanay farany niarahana tamin'i Isaac Mao , izay mpampiasa vola ao amin'ny Blogbus, tsy voatery nanoratra anarana i Laohumiao satria efa voasoratra anarana ilay tolotra mampiantrano bilaogy ary notakiana koa hanaraka ireo fepetran'ny fanatatavànana sy ny sivan'ny governemanta. (Amin'ny teny hafa, raha angatahan'ny governemanta ny Blogbus mba hanala ny bilaogin'i Laohumiao, tsy maintsy manaraka ny Blogbus.)
Fa niteny i Laohumiao fa rehefa nanao fangatahana amin'ny sampandraharaha mahefa ao amin'ny governemantan'i Shangai sy ny Minisiteran'ny Fampahalalambaovao izy, izay namoaka ny fepetra fanoratana anarana ary mandrindra ny fampiharana, valiny mifanohitra isankarazany no azony. Tamin'ny farany, nilazàn'ny vehivavy tanora azony tamin'ny finday tao MII ao Beijing izy fa mila manoratra anarana DAHOLO ireo tolotra mampiantrano bilaogy ary hatramin'ireo bilaogy zanany. Avy eo, nantsoiny ny olona mitantana ny biraon'ny Shangai miandraikitra ny fanoratana anarana ny tranonkala mitoetra ao Shangai. Niteny ilay olona: “信产部热线是怎么搞的？为什么这样解释呢？我要去电话，子域名登什么记呀！” (Fandikana bontolo tsy dia marina satria tsy voadika ireo teny mahavantana: “Inona ny olan'ny MII? Maninona izy ireo no manome an'ity fanazavana ity? Hiantso azy ireo aho. Tsy mila manoratra anarana ny zana-tsehatra !”)
Mba tiako hisaraka itony fitantànana Sinoa itony. Naheno avy amin'ireo Sinoa bilaogera sasantsansany aho izay manantena ny ho tafaporitsaka ao anelanelan'ny triatry ny fifanjevoan'ny fitantanana.
Araka ny notondroinay tao amin'ilay bango tokana ny Zoma , nameno antonta-taratasy hahazoana laharana fisoratana anarana ho an'ny bilaoginy i Wang Jianshuo, nefa mbola miandry  valinteny avy amin'ireo manampahefana.
Ho an'izay mampety azy, rehefa mitety ny bilaogy shinoa tamin'ny herinandro farany teo, nandalo bilaogy betsaka miaraka amin'ny laharana nisoratany anarana misoratra eo aminy aho.
Tsy tapitra akory ny fanoratana bilaogy ao Shina. Raha ny tena izy, araka ity tatitra ity , heverin'ny BlogChina , ilay orinasa mampiantrano bilaogy ny hisoratra anaty lisitry ny Nasdaq.
Ho valin'ny fanontaniako tamin'ireo Shinoa bilaogera  momba ny fiantraikan'ny fanasivanan'ny aterineto amin'izy ireo ary eo amin'ireo Shinoa hafa mpampiasa aterineto, nahazo valiny isankarazany aho.
Mihevitra ny olona fa eo anelanelan'ny 1 sy 5% amin'ny Shinoa mpampiasa aterineto no mahay mampiasa ny proxy. Misy mihevitra fa azo inoana hanao izany ireo mahay mampiasa azy, ary misy mihevitra fa tsy hisahirana be loatra ireo mahay mampiasa azy satria mahasorena fotsiny ary mandany fotoana be ilay izy.
Tao CNblog , tsipihan'i calon  fa ny tena olana dia tsy misy idirany loatra amin'ny fahaizan'ny olona miditra, fa ny fahaizan'izy ireo mamindra izany ho amin'ny olonkafa.
Manoro antsika taratasy PDF iray voasoratra amin'ny teny Shinoa i MadeinJune , momba ny hoe “demokrasia Shinoa amin'ny endrika ivelany eo amin'ny aterineto “. Tsy namaky an'ilay izy manontolo aho fa toy ny tetikasa goavana ho fandikana teny tsara ho raisin'ny olona ilay izy.
Misy fanehoankevitra iray tsara  momba ny maha-zava-dehibe ny solaitrabe filazambaovao sy ny fomba fiantraikan'ny sivana eo amin'izy ireo.
Williamlong , izay mandrindra tranonkala ihany koa, miteny  fa rehefa ny adiresy IP-n'ny tranonkala iray no voabahana ao Shina, very 99% amin'ny fifamoivozany izy ary rehefa ny anaran-tsehatra misy azy no vosivana dia very 100% amin'ny fifamoivoizany izy.
Niteny  i Ken  fa rehefa voabahana ny tranonkala iray, afaka miteraka resabe sy fahalianana momba ilay tranonkala, mahatonga ny olona hianatra ny fampiasàna proxy izany. Saingy heveriny koa fa hiafara amin'ny tsy fifandanjan'ny vaovao ny politikan'ny governemanta momba ny sivana.
Niteny ny bilaogera ZhiZhaiTianKong (止斋天空)  (bilaogy misoratra ara-dalàna ao Jiangsu) fa misy dikany ny fanontaniako saingy tsy ampy fanakàrana ny vahoaka Shinoa. Nandroso sosokevitra tamiko izy fa mila mifandray aminà olona mipetraka ao Shina ny tenako. Hoy izy “tsy afaka no sady tsy mila miditra amin'ny vaovao rehetra izahay ” ary tsy tsapany ho voasakana izy hiteny izay tiany ho tenenina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/01/22/111064/
 Namaritra ny ezaka nasosotra nataony: http://24hour.blogbus.com/logs/2005/06/1291556.html
 Araky ny tafanay farany niarahana tamin'i Isaac Mao: http://cyber.law.harvard.edu/globalvoices/?p=221
 bango tokana ny Zoma: http://cyber.law.harvard.edu/globalvoices/?p=271
 mbola miandry: http://home.wangjianshuo.com/archives/20050701_registration_claim_of_buggage.htm
 araka ity tatitra ity: http://www.asiamedia.ucla.edu/article.asp?parentid=26292
 fanontaniako tamin'ireo Shinoa bilaogera: http://cyber.law.harvard.edu/globalvoices/?p=269
 Tao CNblog: http://blog.cnblog.org/archives/2005/07/eecaeee.html
 demokrasia Shinoa amin'ny endrika ivelany eo amin'ny aterineto: http://madeinjune.net/blog/content/democracy_cn_net.pdf
 ZhiZhaiTianKong (止斋天空): http://worship.512j.com/weblog/?p=205